महिलामा यौन चाहना बढाउने उपायहरु के के हुन् ? | NepalDut
महिलामा यौन चाहना बढाउने उपायहरु के के हुन् ?
यौनमा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच हुने यौन सम्बन्धमा श्रीमानको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ। श्रीमतीहरु यौन सम्बन्धका लागि इच्छा जाहेर गर्दैनन् ।
कतिपय अवस्थामा त उनीहरु आफ्ना पार्टनरकै खातिर मात्र यौनका लागि तयार भएको जस्तो पनि देखिन्छ । श्रीमती आफै अग्रसर हुने, आफ्नै इच्छा मुताविक यौन आसन बदल्ने, आफ्नो सन्तुष्टिलाई बढी ध्यान दिने गरेको पाइदैन ।
महिलामा यौन इच्छा त्यसकारण पनि कम हुँदै जान्छ कि, जब उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थाल्छ । दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन । प्रेमिल छैन । झैझगडा, मनमुटाव, भनाभन भइरहन्छ भने त्यसले महिलाको यौन जीवनमा सोझो प्रभाव पार्छ ।
आफ्ना पार्टनरसँग उनीहरु भावनात्मक रुपले जति टाढिदै जान्छन्, महिलाको यौन इच्छामा पनि ह्रास आउन थाल्छ । यसका साथै पार्टनरको यौन समस्या, भावनात्मक सन्तुष्टि नमिल्नु र बच्चाको जन्म पनि यसको कारण हुनसक्छ ।
घरमा सासु-ससुरा, देवर-देवरानी, छोराछोरी हुन्छन् । उनीहरुको आँखा छलेर अन्तरंग पल साट्ने अनुकुलता मिल्दैन । अझ बालबच्चा भइसकेको अवस्थामा त महिलाहरुको भूमिका थप बढ्न थाल्छ । बालबच्चा हुर्काउने, स्यहार्ने कुरामा उनीहरु केन्दि्रत हुन्छन् । राती छोराछोरी स्यहार्नुपर्ने, सुताउनु पर्ने जस्ता अतिरिक्त जिम्मेवारी आइलाग्छ ।
यस्तो माहौलमा महिलाहरु उन्मुक्त ढंगले यौन क्रियामा सहभागी हुँदैनन् । पुरुषको तुलनामा उनीहरु बढी लजाउने स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु स्वतन्त्र एवं एकान्तमा जति खुल्छन्, त्यती खुल्न सक्दैनन् । यसले पनि उनीहरुको यौन जीवनमा प्रभाव पार्छ ।